မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး ဝိညာဉ် ဇာတ်ကားကြီး ဖြစ်လာမည့် လိပ်ပြာ စံအိမ် (The only Mom) ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး – WunYan
မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး ဝိညာဉ် ဇာတ်ကားကြီး ဖြစ်လာမည့် လိပ်ပြာ စံအိမ် (The only Mom) ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး
ဘန်ကောက်မှ မန္တလေးသို့ ဇာတ်ကားကြီးကို အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းပုံရိပ်ရိုက်ကွင်း ရိုက်ကွက်တွေနဲ့ပုံဖော်ခဲ့တဲ့ထိုင်းဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ချာချိုင်းကိုပရိတ်သတ်တွေရင်းနှီးလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလှတွေကိုပိုပြီးအသက်ဝင်အောင်ပုံဖော်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်း၊ မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ဘန်ကောက်မှမန္တလေးသို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကလည်းယခုချိန်ထိပရိတ်သတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာထင်ကျန်နေတုန်းစဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာတော့ပထမတစ်ကားနဲ့လုံးဝမတူတဲ့ကြောက်မယ်ဖွယ် ဝိညာဉ်ဇာတ်ကားကြီးကို ရိုက်ကူးပုံဖော်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ ချာချိုင်းက အဆိုပါ ဇာတ်ကားကြီး ပုံဖော်ခဲ့ဖြစ်ပုံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး“မြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးရောက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်ထဲက မြန်မာနိုင်ငံမှာ မတူညီတဲ့ ကမ္ဘာ နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ခံစားမိခဲ့တယ်။ သက်ရှိတွေရှင်သန်တဲ့ ကမ္ဘာနဲ့ ဝိညာဉ်တွေ ရှင်သန်နေတဲ့ပရလောကနှစ်ခု…..ဒီကမ္ဘာတစ်ခုကအတူတကွတည်ရှိနေပြီးတော့မျက်မြင်မရပေမဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးနက်နက်နဲနဲလေ့လာခဲ့တဲ့အခါဝိညာဉ်နဲ့လိပ်ပြာဆိုတဲ့စကားလုံးနှစ်လုံးကိုသိနားလည်ခဲ့ရတယ်။
တကယ်ဆိုရင်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့မတူညီသောရှုထောင့်များစွာကိုဆက်လက်လေ့လာဖို့အများကြီးရှိသေးသလိုကျွန်တော့ကိုလည်းဒီအရာတွေယုံကြည်လာစေဖို့လှုံ့ဆော်ခံခဲ့ရပါတယ်။ လိပ်ပြာစံအိမ် ရုပ်ရှင်သည် ၁၀၀ %မြန်မာစကားပြောလည်းဖြစ်ပါတယ်…. ” ဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။
မွနျမာ နိုငျငံရဲ့ ကွောကျစရာ အကောငျးဆုံး ဝိညာဉျ ဇာတျကားကွီး ဖွဈလာမညျ့ လိပျပွာ စံအိမျ (The only Mom) ရုပျရှငျ ဇာတျကားကွီး
ဘနျကောကျမှ မန်တလေးသို့ ဇာတျကားကွီးကို အကောငျးဆုံးမွငျကှငျးပုံရိပျရိုကျကှငျး ရိုကျကှကျတှနေဲ့ပုံဖျောခဲ့တဲ့ထိုငျးဒါရိုကျတာတဈဦးဖွဈတဲ့ခြာခြိုငျးကိုပရိတျသတျတှရေငျးနှီးလိမျ့မယျလို့ထငျပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံရဲ့အလှတှကေိုပိုပွီးအသကျဝငျအောငျပုံဖျောရိုကျကူးနိုငျခဲ့တဲ့ထိုငျး၊ မွနျမာနှဈနိုငျငံ ပူးပေါငျးရိုကျကူးထားတဲ့ဘနျကောကျမှမန်တလေးသို့ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကလညျးယခုခြိနျထိပရိတျသတျတှရေဲ့ရငျထဲမှာထငျကနျြနတေုနျးစဲဖွဈပါတယျ။ယခုအခါမှာတော့ပထမတဈကားနဲ့လုံးဝမတူတဲ့ကွောကျမယျဖှယျ ဝိညာဉျဇာတျကားကွီးကို ရိုကျကူးပုံဖျောနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါရိုကျတာ ခြာခြိုငျးက အဆိုပါ ဇာတျကားကွီး ပုံဖျောခဲ့ဖွဈပုံနဲ့ ပတျသတျပွီး“မွနျမာနိုငျငံကိုပထမဆုံးရောကျရှိခဲ့တဲ့အခြိနျထဲက မွနျမာနိုငျငံမှာ မတူညီတဲ့ ကမ်ဘာ နှဈခုရှိတယျဆိုတာ ကြှနျတျောခံစားမိခဲ့တယျ။ သကျရှိတှရှေငျသနျတဲ့ ကမ်ဘာနဲ့ ဝိညာဉျတှေ ရှငျသနျနတေဲ့ပရလောကနှဈခု…..ဒီကမ်ဘာတဈခုကအတူတကှတညျရှိနပွေီးတော့မကျြမွငျမရပမေဲ့ဆကျသှယျနိုငျကွပါတယျ။ကြှနျတျောတို့ထပျပွီးနကျနကျနဲနဲလလေ့ာခဲ့တဲ့အခါဝိညာဉျနဲ့လိပျပွာဆိုတဲ့စကားလုံးနှဈလုံးကိုသိနားလညျခဲ့ရတယျ။
တကယျဆိုရငျမကျြစိနဲ့မမွငျနိုငျတဲ့မတူညီသောရှုထောငျ့မြားစှာကိုဆကျလကျလလေ့ာဖို့အမြားကွီးရှိသေးသလိုကြှနျတော့ကိုလညျးဒီအရာတှယေုံကွညျလာစဖေို့လှုံ့ဆျောခံခဲ့ရပါတယျ။ လိပျပွာစံအိမျ ရုပျရှငျသညျ ၁၀၀ %မွနျမာစကားပွောလညျးဖွဈပါတယျ…. ” ဆိုပွီးပွောပွခဲ့ပါတယျ။